Mid ka mid ah dagaalada joogtada ah ee aan kula halgamayo shirkadaha ayaa ah inaan joojiyo fikirka waxay qabtaan oo bilow inaad ka fikirto sababta dadku u isticmaalaan wax soo saarkooda ama adeeggooda. Waxaan ku siin doonaa tusaale deg deg ah… maalinba maalinta ka dambeysa, waxaad i heli doontaa aniga oo duubanaya oo aan tafatirinaya boodhadhka, qorista lambarka is dhexgalka, hirgelinta xalalka dhinac saddexaad, iyo tababbarka macaamiishayda Blah, blah, blah… taasi maahan sababta ay dadku qandaraasyadayda ugu adeegaan. Waxay heli karaan mid ka mid ah adeegyadaas Fiverr boqol doolar shaqo. Macaamiishaydu way i shaqaaleeyaan maxaa yeelay waxaan awood u leeyahay inaan beddelo dadaalkooda suuq-geynta dijitaalka ah isla markaana aan u kobciyo natiijooyinkooda si mug leh maalgashi yar.
Waxaa jira isbarbardhig aan inta badan isticmaalo. Waxaan haystaa gaari aan u soo kaxeeyo dayactir bil kasta ama sidaas. Waa inaan gaadhigayga ku haayo xaalad wanaagsan oo aan dib ugu sii laabto shaqada. Ma ihi makaaniggaas. Hadda, haddii aan jeclaan lahaa in gaarigeyga wax laga beddelo oo la casriyeeyo si aan ugu guuleysto tartamada, miyaan u keeni lahaa makaaniggaas? Maya. Hay'addeydu maahan dukaan beddelka saliidda, waa kan ku guuleysto tartanka dukaanka.
Waa inay tahay ku kala sooc tartamayaashaada khadka tooska ah. Haddii liiskaaga soo jeedinta qiimaha ay lamid tahay kuwa kula tartamaya, waxaad diirada saartaa mid aysan diiradda saarin. Tusaalahayga, ma nihin hay'ad diiradda saareysa hal channel, qibradeyda waxay ku aaddan tahay teknoolojiyad iyo istiraatiijiyado fara badan sidaa darteed waxaan kula talin karaa hoggaamiyeyaasha ganacsiyada sida loo horumariyo ganacsigooda iyadoo lala xiriirayo kheyraadkooda sida loo fulinayo.
Hal tusaale oo weyn waa Xarumaha Xogta Nolosha, a midabaynta midwest xarunta iyo macmiilkeena. Waxay leeyihiin qol ka badan oo loogu talagalay miisaan inta ka badan tartamayaasha kale ee Midwest. Waxaa loo sharciyeeyay xogta sirta ah ee ugu sareysa federaalka. Oo… waxay hadda ka dhisayaan xafiis xafiisyadooda. Isku darka ayaa ah mid gaar ah oo aan iyaga kula shaqeyneyno a goobta iyo dib u naqshadaynta calaamadda taasi waxay si buuxda u koobi doontaa kala duwanaanta!
UVP-gaagu uma horseedi karo magac-bixin dhan entire laakiin waa inay ka muuqataa websaydhkaaga, bulsheed, iyo joogitaanka raadinta waxa soo jeedintaadu tahay! Waa kuwan faahfaahin wanaagsan oo ka socda QuickSprout, Sida loo qoro Soo-jeedin Qiimo Weyn.